Android တွေကို ကျော်သွားနိုင်မယ့် Apple iPhone အသစ်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က? – DigitalTimes
Android တွေကို ကျော်သွားနိုင်မယ့် Apple iPhone အသစ်တွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က?
ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာမိတ်ဆက်လာမယ့် iPhone အသစ်တွေကို ထောက်ပံ့ပေးဖို့ TSMC က chip အသစ်တွေထုတ်လုပ်နေပါပြီ။ ဒီနှစ် iPhone အသစ်တွေရဲ့ A12 Chip တွေကတော့ TSMC ရဲ့ 7nm Process ကိုသုံးပြီးထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ စွမ်းအင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုတွေ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက ပြိုင်ဘက်တွေထက် သာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
TSMC ရဲ့ 7nm Process နဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေဟာ အရင်မျှော်မှန်းထားတာထက်ကို ပိုမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ဇွန်လ ၂၁ရက် ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့နည်းပညာပြပွဲမှာ TSMC စီအီးအိုကနေ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
စီအီးအိုကတော့ ဒီ 7nm Chip တွေက ဘယ်သူဘယ်ဝါအတွက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာ မဖော်ပြထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဈေးကွက်သမားတွေကတော့ TSMC ရဲ့ 7nm Chip ထုတ်လုပ်မှုတွေ ၂၀၁၈ခုနှစ်ကျမှ မြင့်တက်လာရခြင်းက လာမယ့် iPhone အသစ်တွေမှာသုံးမယ့် A12 Processor တွေမှာယူခြင်းကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းကြပါတယ်။
iPhone X နဲ့ iPhone 8 တွေအတွက် A11 Bionic Chip တွေထုတ်လုပ်တုန်းကလည်း Apple က TSMC နဲ့လက်တွဲခဲ့ပြီး A11 တွေတုန်းကတော့ 10nm Process ကိုပဲသုံးပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ A11 10nm Process တုန်းကတောင် စွမ်းဆောင်ရည်ကမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဆိုတော့ လာမယ့် 7nm A12 Chip တွေက iPhone User တွေကို ဘယ်လိုအရူးအမူးဖြစ်စေနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြရအောင်…
Tags: Apple, Apple A12 Chip, TSMC
Face Unlock စနစ်ကို မကြာခင် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Nokia စမတ်ဖုန်း ၄လုံး